Maitiro ekuwedzera zvimisikidzo zvetsika kuWhatsApp pane iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuwedzera zvimisikidzo zvetsika kuWhatsApp pane iPhone
Iwo maStickers aive kusvika kwakanaka kune iyo iOS vhezheni yeWhatsApp Mavhiki mashoma apfuura, zvisinei, sezvazvinowanzoitika mune aya kesi, akasiyana masitikiti anga akaganhurirwa. Iye zvino mugadziri weSpanish, kunyanya Jacobo Rodríguez, uyo akaisa chinamira uye chinosarudza WhatsApp kuApp Store.
Ndosaka nhasi Isu tinokuudza iwe kuti iwe unogona sei kuwedzera ako akasarudzika mavara ekunamatira e WhatsApp pane iyo iPhone Izvi zvinokushandira kwete chete kuwedzera, semuenzaniso, zvitambi zvakagadzirwa zvichibva pamifananidzo yako, asi iwe zvakare unozokwanisa kugadzira zvitambi kubva pane chero pikicha iwe yawakadhonza zvakananga kubva paInternet, zvisinei nekopimendi.
Zvakanaka, sezvatakataura, chinhu chekutanga kurodha pasi StickersApp izvo zvakaita Gadzira Stickers muApple App Store mahara, kunyangwe iine mubhadharo wakasanganiswa uyo unotibvumira kubvisa shambadziro shoma dzainadzo, dzakati unogona kuishandisa zvakanyanya sezvaunoda, asi uchave nemukana wekutsigira budiriro kuburikidza nekubhadhara kwakabatana. . Muchidimbu, isu tave kuenda nematanho ekutevera.
Isu tinotora iko kunyorera.
Dzvanya pakona yekumusoro kurudyi kuwedzera pasuru nyowani.
Isu tinowedzera kuburikidza neraibhurari yedu kana zvakananga kubva kuICloud Drive faira rinotsvaga ese iwo mafoto kana mifananidzo yatinoda.
Tinodzokera uye tinya pa «Export».
Dzvanya pane sarudzo «Mune WhatsApp».
Saka WhatsApp ichativhurira uye isu tichazongofanira kuvawedzera. Nekudaro, izvo zvinodikanwa kuti utaure iyo tsananguro yatinofanira kuwedzera zvisiti zvitanhatu kuitira kuti tisazove nedambudziko pakuumba pasuru, uye pamusoro pezvose rangarira kuti chishandiso chine akateedzana ezvimwe zvaunogona kuona muvhidhiyo ye chikamu chepamusoro, ndokuti, iwe unogona kugadzirisa mifananidzo uye kugadzirisa saizi yezvimiti zvaunowedzera kuWhatsApp. Yasvika nguva yekugadzirisa ako ekunamatira paWhatsApp zvakare yeiyo iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuwedzera zvimisikidzo zvetsika kuWhatsApp pane iPhone
Javi nino akadaro
Izvo hazvishande kwandiri, chinhu choga chazvinoita kutumira mafoto kuWhats asi kutumira, pasina nguva
iyo sarudzo yekugadzira chinamirwa mune chii kana chimwe chakafanana chinoonekwa
unofanirwa here kuita chakakosha?
Pindura Javi Nino